Golaha Wasiirada ee dowladda KMG Soomaaliya oo kulan ka yeeshay qaraxii Golaha Murtida shalay kadhacay, heshiisyadii Gaalkacyo,dowladda Germany iyo Dowladda KMG – Radio Daljir
Mogadishu, Apr 05 -Golaha Wasiirada ee dowladda faderaalka KMG ah ee Soomaaliya ayaa galabta isugu yimid kulankoodii todobaadlaha ahaa, kulanka oo ahaa mid albaabada ay u xiranyihiin ayaa markii uu soo dhamaaday waxaa kasoo baxay warsaxafadeed kusaabsan waxyaabaha kulanka kasoo baxay.
Warsaxafadeedka ayaa waxaa uu u qornaaa sidaan
Shirkii caadiga ahaa ee Golaha Wasiiradda ayaa maanta waxaa shir-guddoominayey Ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr. Abdiweli Mohamed Ali, loogana hadlay Qaraxii is-miidaaminta ee shalay ka dhacay Tiyaatarka, heshiiskii Gaalkacyo, arrimaha amniga iyo goboladda, Is-afgaradkii Soomaaliya iyo Jarmalka kala saxiixdeen 31kii Maarso 2012 iyo heshiiska caalamiga ah ee ka hortagga miinooyinka.
Golaha Wasiiradu waxey si kulul u cambaareeyeen falkii shalay dhacay ee haweeney isku qarxisay Tiyaatarka oo ay ku dhinteen madaxdii Isboortiga Soomaaliya iyo dad kale kuna tilmaameen mid fuleynimo ah. Golahu waxey isku raaceen in loo baahanyahay in tallaabo adag laga qaado cidii mas?uuliyadeeda leh ka dib marka la baaro. Golahu waxey isku raaceen:
Guddi heer wasiiro ayaa la magacaabay si ay baaritaan dhab ah ugu sameeyaan falkii shalay dhacay isla markaana uu Ra?iisul Wasaarahu amray inay warbixin ku soo gudbiyaan 24saac gudahooda.
Ra?iisul Wasaarahu waxuu caddeeyey in falkan loo baahanyahay in cashar laga qaato oo tallaabo adag laga qaado cid allaale iyo ciddii mas?uuliyadda falkan ku cadaato.
Ra?iisul Wasaaraha ayaa golaha siiyey warbixin ku wajahan heshiiskii Gaalkacyo ay saxiixayaasha Roadmap ka ku yeesheen 26kii Maarso, waxuuna sheegay in mas?uuliyadda soo xulidda xubnaha Guddiga Ansixinta Dastuurka ay leeyihiin madax dhaqameedka Soomaaliyeed oo ay saacidayaan bulshada rayidka ah.
Sidoo kale in 135 madax dhaqameed ee matala dhammaan beelaha Soomaaliyeed iyadoo lagu qeybsanayo habka 4.5 ay isagu imaanayaan Muqdisho 25ka April 2012 si ay u bilaabaan soo xulidda xubnaha Guddiga Ansixinta Dastuurka. In tiradii 1000 ka ergo laga dhigay 825 oo loo arkay in tiradan ay si sahlan ugu qeybsami karto habka 4.5 oo leh raadraac hore.
Ra?iisul Wasaare ku xigeenka ahna Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha ayaa golaha warbixin ka siiyey safar uu Muqdisho ku yimid Wasiirka dhaqaalaha iyo horumarinta ee Jarmalka 31kii Maarso, isla markaana Dowladdaha Soomaaliya iyo Jarmalka ay kala saxiixdeen Is-afgarad ay Dowladda Jarmalku ugu yaboohday Soomaaliya lacag dhan 94 million Euro oo mashaariic horumarin loogu sameynayo Soomaaliya iyo 6 million oo ay ugu talo galeen magaalada Muqdisho. Golahu waxey dowladda Jarmalka uga mahadceliyeen kaalmadaas oo ay weliba si toos ah ula galeen Dowladda.